यो झारलाई चिन्नु हुन्छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार सम्मकाे कमाई, कसरी कमाउने सकिन्छ त ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / यो झारलाई चिन्नु हुन्छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार सम्मकाे कमाई, कसरी कमाउने सकिन्छ त !
admin3weeks ago जीवनशैली Leaveacomment 99 Views
आज मङ्सिर १९ गते आईतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
यो झारलाई चिन्नु हुन्छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार सम्मकाे कमाई, कसरी कमाउने सकिन्छ त ! जागर र पौरखमा सिप घुलाउन सके सुन बनाउन सकिन्छ । आफ्नै माटोलाई पगालेर मोती बनाउँन सकिन्छ ।
नेपाल सम्भावना नै सम्भावना भएको देश हो । यसैले हामी आज हाम्रा भीर पाखाबाट कसरी आम्दानी गर्न सक्छौ भन्ने जानकारी दिँदैछौ । अर्गानिक वल्र्ड प्रा,लीले काभ्रेका विभिन्न ६ वटा सामुदायिक वनमा चारकोल बनाउन किसानहरुलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले किसानहरुले तयार पारेको चारकोल किनिदिने समेत गरेको छ । गाउँमा तयार भएको चारकोल किसानहरुले सजिलै बेच्न सक्ने भएसँगै अहिले चारकोलको उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ ।
केही बर्ष अघिसम्म रोजगारी खोज्न शहर बजारमात्र होइन विदेश जान भन्दै काठमाडौंका मेनपावर कम्पनी धाउने कोशिपारीका स्थानीयहरु यतिखेर भने वनपाखाको काँडा, बनमरा पोल्नमै व्यस्त छन् । वनमा रहेका काँडा, उन्यू र झारपातहरु पोलेरै मासिक ५० हजार रुपैयाँ सम्म कमाई हुने भएपछि यूवाहरु अरु छोडेर झाँडी पोल्न लागेका हुन् ।
काभ्रे कोशीपारीका ६५ बर्षिय बाबुराम तामाङ दैनिकजसो पाखामा काँडा काटिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । बारीमा लगाएको मकै, दुम्सी र बदेलले छिनमै स्वाहा बनाउने तामाङलाई केहीबर्ष अघिसम्म दैनिक छाक टार्न मुस्किल पर्ने गर्दथ्यो ।
Previous कन्नड अभिनेत्री रचिता रामले ‘सुहागरात’ का बारेमा यस्तो बयान दिएपछि हंगामा मच्चियो
Next भोलि कार्तिक २८ गते आईतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
से’क्सका लागि उचित समय राति कि बिहान ? कारणसहित
आफ्नो पार्टनरसँग यौं,’न सम्पर्क गर्न उचित समय कुन हो ? रातिको समयमा सम्पर्क गर्द उचित …